एकदम लामो समय को लागि उहाँले 2107 लामबद्ध, तिनीहरूले भन्न रूपमा नेता लाग्यौं र थियो। त्यसपछि "नौ" र "सात" आफ्नो शीर्षक नष्ट आए। 2107 मा उत्पादन को सुरुदेखि पाउन सकिन्छ जो बीच 1.6 लिटर, 1.5, र कहिले काँही पनि 1.3 विभिन्न मोटर्स, सेट गर्छ। प्रसारण लागि जाँदा, त्यहाँ मात्र पूरा4वा 5-गति मार्गदर्शन - तपाईंलाई थाहा रूपमा, मेशिन मा क्लासिक प्रकृतिका अवस्थित छैन।
माथिको मोटर्स को सबै कार्बोरेटर इन्धन प्रणाली छ, त्यसैले तिनीहरू कहिलेकाहीं सादगी द्वारा प्रहार छन्। 2107 इंजेक्टर बोट 2002 मा जारी गर्न थाले। कुनै कार्बोरेटर छ, र इन्धन नलिका मार्फत प्रत्येक सिलिन्डर आपूर्ति गरिएको छ। धेरै आपूर्ति प्रणाली wherein उच्च-दबाव पंप माउन्ट छ ट्यांक, मा सुरु हुन्छ। थप पेट्रोल असल फिल्टर गर्न आउँछ जो मार्फत पाइपलाइन प्रवेश गर्छ। पछिल्लो निकै को पागल कडा, ताकि प्रणालीले प्रवेश हावा पूर्ण बहिष्कृत छ। यो निर्माण गर्न धन्यवाद, इंजेक्टर 2107 आफ्नो पूर्ववर्ती कार्बोरेटर भन्दा धेरै विश्वसनीय छ।
तर, यो बावजुद, कार सेवा धेरै फरक छ। उदाहरणका लागि, समायोज्य वाल्व VAZ 2107. इंजेक्टर को सञ्चालन असर गर्दैन को समय, त्यसैले यसलाई यस्तो प्रक्रिया बारे भूल आवश्यक छैन। यो समयमा बाहिर छैन भने, सिट मा वाल्व संयन्त्र गर्न क्षति गर्न अनिवार्य नेतृत्व गर्नेछन् जो एक निक्षेप, गठन।
यो रहलपहल र असफलता भने हुनुपर्छ। स्वाभाविक, को पहनने भागहरु छुट्टै समूहको रूपमा वर्गीकृत गर्नुपर्छ, तर "रोग" मा केही ध्यान तिखार्ने गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, गम्भीर समस्याका अगाडि निलम्बन। उनको "दुखेको स्थान" हुन मानिन्छ बल बेयरिंग र bushings। स्वाभाविक, यो जो, विचार मा, हामी एक दर्जन उद्धृत गर्न सक्छन् सिर्फ एक उदाहरण हो। तर, यो बावजूद, डिजाइनर आदर तिर्न गर्नुपर्छ। को 2107 इंजेक्टर आफ्नो इन्जिन गर्न समस्या पैदा गर्दैन भन्ने तथ्यलाई। तिनीहरूलाई लागि मायालु तेल र फिल्टर तत्व को समसामयिक प्रतिस्थापन, साथै केही समायोजन कम छ। हेरविचार वाल्व संयन्त्र यो सूचीबाट बहिष्कृत छ त नयाँ मोडेल, VAZ hydrojacks संग सुसज्जित छन्। सामान्य मा, त्यहाँ फाइदा चयन गर्न हो VAZ 2107 इन्जिन इंजेक्टर वास्तवमा सम्पूर्ण कार बस एक राम्रो अतिरिक्त बन्नेछ। सम्म 2006 यसलाई बीच चयन गर्न सम्भव थियो इंजेक्टर वा कार्बोरेटर, राम्रो त्यसपछि एक विकल्प जस्तै को खरीदार deprived थियो।
साथै, यो कार को सापेक्षिक लोकप्रियता टिप्पण लायक छ। रूस, अगाडि-पाङ्ग्रा ड्राइव संग जो रुचि "क्लासिक" विदेशी कार, साथै मोडेल मानिसहरूको धेरै मा। त्यसैले, इंजेक्टर 2107 भन्दा अन्य, तिनीहरूले कुनै विकल्प छ। र यो उत्साह मोडेल को रिसाइकिलिंग कार्यक्रम द्वारा प्रस्तावित, र यसको मूल्य पनि VAZ बीचमा सबै भन्दा कम थियो भन्ने तथ्यलाई द्वारा बताए गर्न सकिन्छ। जो यो थियो, तर वोल्गा सवारीसाधान बोट यो उत्पादन गरिएका र अब एउटै लाइनमा निर्माण गरिनेछ, "LADA Granta"। हाल लोकप्रियता गति प्राप्त छ। त्यो जित्न सक्छौं भने "सात" हेरौं।
सबैभन्दा महंगा कार - अतिरिक्त4लाख छ जो?
Bryus Kempbell - जीवनी र अभिनेता को Filmography। रोचक तथ्य
को currants राम्रो फसल एक लागि वसन्त मा खाद?
इभ्यानोभो चिडियाघर: इतिहास, वर्णन र फोटो